China Trampoline ပန်းခြံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Haiber ကစားစက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ trampoline ဥယျာဉ်များကို ASTM F2970-13 စံနှုန်းနှင့်အညီဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လုပ်သည်။ trampoline လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအတားအဆီး၌သင်တို့၏ခုန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ကောင်းကင်သို့ခုန်ခြင်းနှင့်ခြင်းတောင်းထဲသို့ဘတ်စကက်ဘောရိုက်, နှင့်ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေမြှုပ်၏အကြီးမားဆုံးရေကန်သို့ဖွင့်! သငျသညျအဖွဲ့သည်အားကစားကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, သင်၏ရေမြှုပ်ကိုကောက်နှင့် trampoline dodgeball ရန်ပွဲ join!
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ layout နှင့် space ကိုစိတ်တွင်ဒီဇိုင်းအကောင်းဆုံးအမေရိကန်အသင်းသည်သင်၏ trampoline ပန်းခြံကိုကြွယ်ဝစေသည့် Main Court ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤဆွဲဆောင်မှုသည်လူကြိုက်များသော trampoline အိပ်ရာအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏ trampoline pads များနှင့်အိပ်ရာအစင်းများအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သောရောင်ပြန်ဟပ်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ပန်းခြံ၏ကစားနိုင်မှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် trampoline ပန်းခြံတွင်အားကစားအမျိုးမျိုးကိုလည်းပေးထားသည်။ ၎င်းတို့တွင်အကျော်ကြားဆုံးဘတ်စကက်ဘောကွင်း၊ Dodge ဘောလုံးနှင့်ရေကူးကန်များသို့မဟုတ်လေထုမွေ့ယာများပါဝင်သည်။
2. အပျော့အိတ်၏ trampoline မျက်နှာပြင်သည်အလွန်လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ trampoline အစွန်းပေါ်တက်သွားလျှင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
3. Trampoline တပ်ဆင်ခြင်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော့ပျောင်းသောထုပ်ပိုးမှုကုသမှုအတွက်တည်ဆောက်ပုံနှင့်တိုင်များပတ်ပတ်လည်တွင် trampoline ကိုမတော်တဆထိမိလျှင်သော်လည်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ အပြန်အလှန် Trampoline
နောက်တစ်ခု: Ninja သင်တန်း